वैज्ञानिक टमाटर खेती गर्दै
विवश वस्ती मंगलवार, भाद्र २७, २०७४
जबकि, अरू तरकारीका बीउ भने भारत, जापान, थाइल्यान्ड, कोरियाबाट आयात गरिन्छ । उनले नार्कका अवकाशप्राप्त वैज्ञानिकहरूलाई हाइब्रिड तरकारीको बीउ उत्पादन अनुसन्धान कार्यमा अभिप्रेरित गर्न राज्यलाई नगुहारेका होइनन् । तर्क गरे पनि, ‘एउटा वैज्ञानिकमा ४० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने उसले पाँच वर्षमा एउटा नयाँ जात निकाल्छ ।’ तर, भएनन् केही पनि । डा. बुढाथोकी र टमाटर पर्याय नै बनिसके । उनलाई ‘टमाटर–क्रान्तिको नायक’भन्दा असान्दर्भिक नहोला । ०२८ सालमा भारतको राजस्थानस्थित उदयपुर युनिभर्सिटीबाट बीएस्सी–एजी गरेपछि नेपाल फर्किएर सहायक तरकारी विकास अधिकृतको रूपमा जागिर थालेका उनले एक वर्ष पोखरामा बिताए । त्यसलगत्तै उनी सर्लाहीको नवलपुर सरुवा भए । त्यहाँ पूरै चारकोसे झाडी थियो । उनले झाडी फाड्न लगाइ फार्म बनाए ।
डा. बुढाथोकी ०५२ सालमा वागवानी अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख भए । त्यसपछि उनले ‘प्लास्टिक–घर’ को अवधारणा ल्याए । मध्यपहाडी भेगमा हिउँदमा तुषारो र वर्षामा अत्यधिक वर्षात्ले तरकारीलाई नोक्सानी तुल्याउने देखेपछि ‘प्लास्टिक–घर’को बाटो रोजेका उनले शुरुमा लुभुका तीन, धर्मस्थलीका दुई र टौदहका दुई किसानको जग्गामा प्रयोग गरे । ती सबै जग्गामा टमाटर रोपे । भन्छन्, ‘प्लास्टिक–घरको उत्पादनपछि किसानहरूले एक रोपनीबाटै दुई लाखसम्म आम्दानी गर्न थालेपछि यसको माग बढ्न थाल्यो । मैले पनि नक्खुमा ५० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर टमाटर खेती गर्न थालेँ ।’ जेठदेखि साउनसम्म नेपालको पहाडी भेगमा उत्पादित टमाटर भारतसम्मै पुग्ने डा. बुढाथोकी बताउँछन् । २०५४ सालमा नार्कमा वरिष्ठ वैज्ञानिक भएर प्रवेश गरेका उनी त्यही वर्ष काभ्रेको पाँचखाल गएका थिए । त्यहाँ उनले ‘ब्याक्टेरियल विइल्ड’ नामक जीवाणुका कारण ८० प्रतिशत टमाटर ओइलाएको पाए । एउटा किसानले त ठाडै चुनौती दिँदै भने, ‘अब कुनै माइकालालले पनि नओइलाउने जातको टमाटर निकाल्न सक्दैनन्, कसैले निकाल्छन् भने हामी सुनकै शालिक बनाइदिन्छौँ ।’ ती किसानका चुनौतीले डा. बुढाथोकीलाई घोत्लिन बाध्य पार्‍यो ।
एक दिन, नार्कमै बसिरहेका बेला काठमाडौं, पशुपतिकी सिर्जना आचार्य उनलाई भेट्न आइन् र भनिन्, ‘सर, मैले हिमाञ्चलबाट बीएस्सी–एजी गरेकी छु । तर, जागिर पाइनँ । जागिर पाइन्छ कि भनेर आएकी हुँ ।’ डा. बुढाथोकीले उनीसामु एउटा प्रस्ताव राखे, ‘तिमी हिमाञ्चल प्रदेशमा जाऊ र नओइलाउने जातको टमाटर लिएर आऊ ।’ डा. बुढाथोकीले सिर्जनालाई उक्त कामका निम्ति ५० हजारसमेत दिए । सिर्जनाले भाले–पोथी गरेर १६ वटा जात ल्याइन् । भन्छन्, ‘त्यसपछि म र सिर्जना त्यो जीवाणु सहन सक्ने नयाँ जात विकास गर्नमा लाग्यौं । हामीले १६ जातलाई विस्तार गरेर ६४ वटा कम्युनिकेसन बनायौं । पाँच वर्षको अनुसन्धानपछि हामीले ब्याक्टेरियल विइल्ड नामक जीवाणुलाई सहन सक्ने नयाँ जातको टमाटर विकास गर्‍यौं ।’ नयाँ जातको नाम राखियो– ‘सिर्जना’ । उनै सिर्जना आचार्यको नाम । डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘जसले मिहिनेत गरेको छ, उनैको नाम राखेको हुँ, मैले ।’ डा. बुढाथोकीले ‘सिर्जना’लाई एउटै बोटमा ३१ केजीसम्म फलाए । त्यसको बीउको माग बढ्न थालेपछि भने उनले बीउ उत्पादनमै जोड दिँदै आए ।
हरेक वर्ष उनी एक सय १५ केजीजति बीउ उत्पादन र बिक्री गर्छन् । एक केजी बीउ बेच्दा एक लाख आम्दानी हुन्छ । त्यसो त, सिर्जना ६० ग्रामको टमाटर हो । तर, उनले सिर्जनापछि धेरै ग्राम हुने टमाटरहरू पनि विकास गर्दै आए ।‘उन्नत सिर्जना’ ८० ग्रामसम्म हुन्छ भने ‘सम्झना’चाहिँ सय ग्राम । एक सय २५ ग्रामसम्मको ‘डा.सरिता’ फलाएपछि उनले गत वर्ष मात्रै एक सय ५० ग्रामको ‘डा. तीन’ नामक नयाँ जातको विकास गरे । सम्झना, सरिता भने उनकै फार्ममा कार्यरत केटीहरू हुन् । र, उनीहरूकै नामबाट राखे, विकसित टमाटरको नाम । भन्छन्, ‘जुन काममा जसको श्रम परेको छ, तिनैको नाम राख्न मन पर्छ मलाई ।’
२०५२ सालमा लन्डन युनिभर्सिटीबाट ‘बेमौसमी प्याज’मा विद्यावारिधि गरे पनि डा. बुढाथोकीले आफ्नो सिंगो जीवनलाई टमाटरकै अनुसन्धान र विकासमा समर्पित गरे । त्यसो त उनी प्याजको अनुसन्धानमा पनि लागे । बेमौसमी–१ नामको नयाँ जात पनि विकास गरे । तर, त्यसलाई रजिस्टर्ड गर्न सकेनन् । देशलाई टमाटरमा आत्मनिर्भर बनाएर उनी प्रशन्न छन् । भन्छन्, ‘मजस्तै अरू वैज्ञानिकहरू पनि यसरी नै अनुसन्धानमा दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने हामीले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं ।’